Igumbi elipholileyo elinebhafu
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguAnne
Igumbi lethu lokuqesha yindawo yalo enxibelelana nolwakhiwo. Kukho ibhedi ebanzi ye-120cm kwigumbi. Ebathroom sine bath and shower. Ezinye izixhobo esinazo sisikhenkcisi esincinci, iketile yombane, i-oven microwave kunye netafile. Sikunika iti kunye nekofu ekhawulezileyo endlwini. Kukho indawo yokupaka imoto yakho kunye nendawo yokuplaga isifudumezi semoto. Ehlotyeni wamkelekile ukuba uhlale kwaye ujikeleze eyadini enkulu. Iyadi kwabelwana ngayo nabanini bezindlu.
Egumbini kukho uxolo ngokupheleleyo kwaye indawo yokuhlala inoxolo.
4.88 ·Izimvo eziyi-51
Kukho iivenkile ezi-4, udederhu lweevenkile, ikhemesti, ivenkile eluncedo, ivenkile yezilwanyana kunye nezilwanyana zasekhaya kunye nebar engaphantsi kwe-2 km ukusuka kwigumbi lethu. Indawo inoxolo kwaye kulula ukuya kumbindi weKemi.
Ehlotyeni kukho unxweme olungaphantsi kwe-1 km ukuya elwandle malunga ne-3,5km. Kukwakho nendlela yokubaleka kufutshane nolwandle ngokwendalo. E-Kemi, sinenqaba yekhephu evulekileyo nasehlotyeni! Sinendawo yekharavani kunye nonxweme oluhle kunye neendawo zokutyela ehlotyeni. Elunxwemeni kukho iholo lokuqubha kunye nendawo yokuqubha umkhenkce.
Ababuki zindwendwe bayafumaneka nokuba kwisiza okanye ngefowuni 06.00-21.00